CITIZENSHIP ara-dalàna ataon'ny INVESTMENT ho an'i Sipra | 100% RATE FAHOMBIAZANA | AZO ATAO | Mangataka amin'ny CITIZENSHIP BY INVESTMENT any Sipra, zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola Sipra, zom-pirenena amin'ny alàlan'ny programa fampiasam-bola Sipra, zom-pirenena amin'ny alàlan'ny programa fampiasam-bola Sipra, faharoa
Ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola ho an'i Sipra sy Visa Golden
Manome tolotra fifindra-monina ara-toekarena any Sipra izahay:
● Fonenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Sipra
● Zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola avy any Sipra
● Visa volamena any Sipra
● Pasipaoro faharoa avy any Sipra
● Ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola ho an'i Sipra amin'ny fampiasam-bola amin'ny trano sy tany
Best Agents ho an'ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Sipra ary Mpisolovava an'ny Ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Sipra sy ny brokers ho an'ny fananan-tany fandaharana Citizenship ao Sipra dia miara-miasa amin'ny fiarovana ny mpanjifa.
Ny zom-pirenenan'ireo masoivohon'ny fampiasam-bola ho an'i Sipra dia manome serivisy ho an'ny honenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Sipra, ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny programa fampiasam-bola any Sipra, ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Sipra, ny zom-pirenena faharoa amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Sipra, ny zom-pirenena roa amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Sipra, ny zom-pirenena ary ny fampiantranoana any Sipra. , zom-pirenena maharitra amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Sipra, zom-pirenena maharitra amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Sipra, zom-pirenena amin'ny alàlan'ny tetika fampiasam-bola any Sipra, zom-pirenena amin'ny alàlan'ny tetika fampiasam-bola any Sipra, fonenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Sipra, fonenana amin'ny alàlan'ny programa fampiasam-bola any Sipra, fandaharana fampiantranoana any Sipra, faharoa Fonenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Sipra, toeram-ponenana roa amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Sipra, toeram-ponenana ary zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Sipra, fonenana ary zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Sipra, fandaharan-kevitra momba ny Resident economic any Sipra, ny teti-pivoarana misy amin'ny fampiasam-bola any Sipra, ny teti-pivoarana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Sipra, faharoa pasipaoro any Sipra, programa pasipaoro faharoa any Sipra izahay, programa pasipaoro faharoa any Sipra, pasipaoro faharoa indroa any Sipra, toeram-ponenana ary pasipaoro faharoa any Sipra, pasipaoro diplomatika faharoa any Sipra, pasipaoro faharoa amin'ny fampiasam-bola any Sipra, pasipaoro fizarana zom-pirenena faharoa any Sipra, tetikady pasipaoro faharoa any Sipra, tetikady pasipaoro faharoa any Sipra, visa volamena any Sipra, visa volamena any Sipra, programa visa volamena any Sipra, programa visa volamena any Sipra, visa volamena faharoa any Sipra, programa visa volamena faharoa any Sipra, visa volamena roa any Sipra, zom-pirenena ary visa volamena any Sipra, toeram-ponenana sy visa volamena any Sipra, zom-pirenena visa volamena any Chypre, drafitra visa volamena any Sipra, drafitra visa volamena any Sipra.
"Vahaolana 1 fijanonana" ho an'ny zom-pirenenao rehetra amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Sipra miaraka amin'ny fanampiana fanampiny.
Fampiasam-bola farafahakeliny any Sipra ho an'ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola: 2.15 tapitrisa EUR
Fampidirana Sipra sy zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola
Ny Jewel of the Mediterranean, na ny Repoblikan'i Sipra, dia firenena kely nosy, hita atsimon'i Torkia ary eo atsimoatsinanan'i Gresy ihany. Io no nosy lehibe indrindra fahatelo amin'ny Ranomasina Mediterane, aorian'ny Sardinia sy Sisila, mikasika ny isam-ponina ihany. I Sipra dia fanahy iniana apetraka amin'ny fampifangaroana ireo sambo telo: Eropa, Azia ary Afrika. Ity zanatany britanika teo aloha ity, izay naka ny fizakan-tenany tamin'ny taona 3, dia toerana mahaliana efa ela be izao. Ilay nosy koa dia nampitombo prevalence be dia be ho tanjona ex-pat miaraka amin'ireo olona avy amin'ny toerana rehetra manerantany.
Sipra no misy ny moron-dranomasina izay mizotra lavitra amin'ny halavirana lehibe, rava ianao afaka mandehandeha, fromazy mahafinaritra, ary ny anaran'ny divay efa niorina mafy indrindra teto amin'ny planeta (Commandaria). Raha oharina amin'ny habeny, i Sipra dia manana tantara marobe. Ao Paphos, ianao dia hijery ireo relik azo itokisana taloha, amin'ny isan'ny fivarotana fitazomana, toy ny toerana arkeolojika nanomboka tamin'ny taonjato fahefatra talohan'i JK. Ny ampahany sisa tavela amin'ny trano fonenana taloha, toerana ary toeram-pandevenana dia nanome an'ity tanàna ity ny toerana misy ny UNESCO Heritage Heritage Site. Ity nosy ity ihany koa dia ekena amin'ny ankapobeny ho iray amin'ireo tanjona lehibe indrindra amin'ny lozam-pifamoivoizana 10 amin'ny planeta.
Mazava ho azy fa tsy mora ny miaraka sy mifindra any amin'ny toerana hafa tsy takona. Marina io ho an'i Sipra satria tsy dia mieritreritra firy momba ny firenena ny olona. Na izany aza, ireo mpikapoka taloha voafidy ny nosy dia manome toky fa ho faly sy afa-po amin'ny tranony vaovao.
Raha sendra mitady tanjona taloha hafa ianao, dia ataovy izay hahatonga anao hanana ahiahy voalohany indrindra fa misy teboka maro mahaliana ny hipetraka ao amin'ny Jewel of the Mediterranean, amin'ny maha-fianakaviana iray ihany. Diniho izay hahitana ny antony 5 tsara hanatsarana ny fiainanao ny fifindrana mankany Sipra:
Mpanentana sy fahatapahan-ketra ho an'ireo mpividy an-trano
Ny fisarihana tena izy ho an'ireo tompona fananana mihoampampana eran-tany dia ny karazan'entana azony avy amin'ny fahefam-panjakana, ao anatin'izany ny fanapahana hetra, ny taratasy an-dapa amin'ny ampahany betsaka amin'ny vidiny, ary ny fotoana ahazoana pasipaoro UE.
Ny vidin'ny tany dia tsy niakatra be hatramin'ny fahalovana azy ireo nandritra ny vonjy taitra noho ny vola 2008 ary be loatra ny trano azo jerena. Na izany na tsy izany dia misy ny fanondroana ny fanitsiana, indrindra noho ny tsindry ataon'ny governemanta. Tamin'ny 2015, ny manam-pahaizana manokana dia namorona programa fohy, mampihena ny fandaniana amin'ny fizaram-pananana. Solontena iray ho an'ny minisiteran'ny Vola no nanambara fa io famporisihana io dia mety haharitra ela. Ankoatr'izay dia niresaka lalàna iray hafa hatolotra izy, izay hampihena ny fiampangana ny trano amin'ny 75% ary angamba hanafoanana azy io tsy tapaka amin'ny 2017.
Araka ny lalàna, ny olona rehetra mandalo mihoatra ny 183 andro isan-taona ao amin'ity faritany ity dia mendrika ny ho tonga mpiasa ao aminy. Midika izany fa tokony handoa vola amin'ny fandoavam-bola azonao ianao eo an-toerana sy any ivelany. Na eo aza izany, ireo teratany anglisy manana an'ity toeram-ponenana ity dia tsy mila mandoa fiampangana vola fanampiny any Sipra amin'ny fanomezana ny loharanon-karena anglisy any aminy; manonitra ny fitantanan-draharahany (UK) amin'ny fiakarana nangonina taorian'ny volana aprily 2015 (izay no fotoana nanovanan'ny manampahaizana manokana ny lalàna momba ny fanangonana hetra ho an'ireo tompon-tany britanika monina any ivelany).
Azo antoka ny olona any ivelany mividy trano na mividy tany ary manamboatra trano ao amin'ity firenena ity. Ny vidin'ny tany dia tena mifanohitra amin'ny Etazonia, Angletera ary firenena maro samihafa. Ny saran'ny trano mahazatra any amin'ny lafiny Sipra Grika ao amin'ny nosy dia sahabo ho 110,000 $ (88442, € 98206) ankoatran'ny adidin'ny hajia. Ankoatr'izay, ny banky manodidina sy manerantany amin'ny ankamaroan'ny ampahany dia mahatratra hatramin'ny 70% amin'ny fanombatombanana feno ny trano.
Ny làlana mankany amin'ny fividianana trano any Sipra dia afaka maka ody; afaka 3 volana mahery ny fanonanao ny fifampiraharahana. Vokatry ny fampiharana tsy maintsy ataonao amin'ny filankevitry ny minisitra indrindra io. Na ahoana na ahoana, ny tsingerina dia mazava sy tsotra, raha mbola mahita ny manodidina anao hanampy anao amin'ny antontan-taratasy ianao.
Ny hazavan'ny andro sy ny mari-pana mafana
I Sipra dia mankasitraka ny atmosfera mediteraneana miaraka amin'ny fahavaratra mafana sy amin'ny ririnina marina. Ny manodidina ny firenena amin'ny ekoatera dia misy fiatraikany amin'ny mari-pana sy ny toetr'andro ankapobeny. Ny mponin'ny nosy dia miaina hazavana mandritra ny 340 andro ao anatin'ny herintaona.
Mandeha mandritra ny 7 volana farafahakeliny ny fahavaratra, manomboka amin'ny fiandohan'ny volana aprily ary mandrapahatongan'ny faran'ny volana oktobra. Ny mari-pana amin'ny antoandro dia manodidina ny 32ᵒ C mandritra ireo volana ireo ary miakatra hatramin'ny 40ᵒ C na hatrany afovoan-tany. Ny mari-pana amin'ny lohataona amin'ny lohataona dia tohanan'ny rivotra mafana manomboka any Afrika Avaratra na Moyen Orient. Ny mari-pana amin'ny hariva dia afaka miova amin'ny toerana rehetra eo anelanelan'ny 13ᵒ C sy 24ᵒ C, miankina amin'ny faritra. Ny fahavaratra dia tsy hoe mando fotsiny nefa maina koa. Eny tokoa, tsy fahita firy ny mahita rahona eny amin'ny lanitra manomboka amin'ny voalohan'ny volana Jona ka hatramin'ny fetra farany lavitra amin'ny septambra.
Ny masoandro amin'ny tapaky ny taona any Sipra dia mety hahagaga. Na dia betsaka aza ny olona mandray ny tara-pahazavana, dia fahendrena ny mitafy ny mason-koditra matanjaka toy ny fitaovam-piarovana (toy ny akanjo, satroka ary alokaloka) rehefa mirenireny mandritra ny ora tampon'andro, izay mazàna manomboka amin'ny fiandohan'ny tolakandro ka hatramin'ny 3:30 hariva. Ny sunbathers dia tokony hisotro ranon-javatra be dia be koa mba tsy ho maina.
Amin'ny lohataona, ny mari-pana amin'ny andro antoandro, amin'ny ankapobeny, dia midina hatramin'ny 25ᵒ C ary mandritra ny fotoana mangatsiaka kokoa amin'ny taona dia mety hidina hatramin'ny 16 around C. Ny mari-pana amin'ny hariva dia mety hidina ambany hatramin'ny 9ᵒ C. Mandrakizay, ianao hahita andro mamirapiratra mandritra izany fotoana izany sy ny orana mivatravatra tsy misy fitsaharana amin'ny volana novambra sy martsa.
Ny cypriots dia faly amin'ny fomba ahafahan'izy ireo mandeha manao ski amin'ny fireneny sy hidina anaty ranomasina amin'ny fotoana mitovy. Manomboka amin'ny volana Janoary ka hatramin'ny Martsa dia mandeha any an-tendrombohitra Troodos ny sambo-pasika hanao ski ambony arahin'ny filomanosana mahery any an-dranomasina.
Taratasy ambany amin'ny heloka bevava
Nampijaliana i Sipra tamin'ny fiavahana iray nanamarika ny fifandonana mahery vaika teo amin'ny Grika sy ny Tiorka satria samy nanandrana niantoka ity nosy ity ireo firenena roa ireo, tsy nisy vokany tsy azo iadian-kevitra. Na izany aza, mijanona ho iray amin'ireo firenena eropeana azo antoka indrindra honenana izy io. Ny isan-karazany anglisy taloha izay nipetraka tany amin'ny nosy Mediteraneana dia nanome toky fa ny fiadanam-pirenena sy ny fiarovana an'i Sipra dia avo lavitra noho ny UK.
Raha ohatra ny vaky trano tsy dia misy dikany (indrindra ireo mpanao vakansy sy taloha) amin'ny toerana nifandimby dia ambany ny isan-jaton'ny heloka bevava manerana an'ity nosy ity. Ireo mpikaroka dia amin'ity fomba ity ary amporisihina mafy hitazona ny famantarana, ny vola ary ny fananany amin'ny toerana voaaro. Ny vehivavy mpikaroka dia tokony hampihatra ireo dingana mahazatra mitandrina izay hataon'izy ireo any amin'ny firenena any ivelany hafa.
Ity nosy ity dia toerana tsy manam-paharoa hitaiza ankizy. Mety ho an'ny ankizy ny milalao any ivelany nefa tsy manasongadina azy ny olony, satria ny toetrandro ankapobeny na aiza na aiza eto amin'ny firenena dia matetika tsy misy atahorana na inona na inona. Mazava ho azy fa tsara kokoa ho an'ny olon-dehibe ny manara-maso ny zanany kely mba hamelezana izay lesoka sy ratra rehetra.
Ny rafitry ny fitsaboana any Avaratra sy atsimon'i Sipra dia azo ampitahaina amin'ny fanao manerantany. Toy ny toerana maro hafa, ny ex-pats dia afaka mifidy eo amin'ny serivisy ho an'ny daholobe sy ny tsy miankina.
Ny National National Healthcare System an'ny firenena dia manolotra fitsaboana ara-pahasalamana maimaimpoana ho an'ny tanjona fampitana ho an'ny rehetra. Ny cypriot amin'ny asa fivelomana ambany dia tsy mendrika na inona na inona fanafody na famatsiam-bola. Ny fitsaboana krizy any amin'ny tobim-pitsaboana vonjy maika ataon'ny governemanta dia omena maimaimpoana ho an'ny rehetra, anisan'izany ireo teratany ivelany; na dia mety ho izany aza, ny vola lany amin'ny fitsaboana farany dia tokony aloan'ny olona tsy mifanaraka amin'ny volavolan-dalàna amin'ny fanantenana fitsaboana fanampiny.
Ny faritra rehetra an-tanàn-dehibe dia manana fikambanan'ny toeram-pitsaboana tantanan'ny governemanta miaraka amin'ireo trano fitaizana be antitra sy toeram-pitsaboana antonony kokoa. Ny faritry ny serivisy fitsaboana tsy miankina an-tanàn-dehibe dia tototry ny manampahaizana manokana mitantana ny fanazaran-dry zareo manokana. Ny ampahany tsara indrindra ho an'ny ex-pats dia ny saika ny manam-pahaizana momba ny klinika rehetra dia mety nahazo ampahany tamin'ny fanomanana azy ireo tany ivelany ary mahay amin'ny teny anglisy.
Na dia mahavariana aza ny fari-pitsaboana tena ilaina, ny olona tsy fantatra mahazatra any Chypre dia te-hamangy indray ireo firenena niavian'izy ireo raha toa ka tsy maintsy mandalo fomba fitsaboana lehibe izy ireo na mila fitsaboana ara-pitsaboana mampiahiahy kokoa.
Ny ex-pats anglisy dia mahafeno fepetra amin'ny serivisy ara-pitsaboana ao amin'ny fanjakana na manao ahoana na manao ahoana na tsy manampy ny drafitra mpanampy amin'ny fisotroan-dronono federaly any Sipra izy ireo, raha toa ka mahafeno fepetra sasany. Kitiho eto mba hahafantaranao tsara an'io.
Ny hafainganam-pandehan'ny areti-mandringana sy ny aretina tsy azo tohaina ao amin'ny nosy dia ambany dia ambany tokoa. Ny olona any ivelany miditra ao amin'ny firenena dia tsy ilaina raha te hanao tsindrona fanefitra.
Andininy fototra momba ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola ho an'i Sipra
Fampiasam-bola farafahakeliny ho an'ny Ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Sipra
2.15 tapitrisa EUR
Sarany fanampiny ho an'ny visa volamena ho an'ny Sipra
Ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola ho an'i Sipra
Taratasy fanamarinana ny zom-pirenena ("Citizenship") na fahazoan-dàlana maharitra maharitra arakaraka ny drafitra
Fotoana fanodinana ho an'ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Sipra
Tokony hanana fahazoan-dàlana momba ny fifindra-monina mandritra ny 6 volana ary tsy maintsy manana sanda mividiana € 500,000,000 trano fonenana
7 taona nipetrahana ara-dalàna tao Sipra
Fahazoana zom-pirenena roa ho an'ny olom-pirenen'i Sipra
Safidy fampiasam-bola ho an'ny Ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Sipra
Maninona no mandeha amin'ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Sipra
Manana toerana ara-jeografika lehibe i Sipra. Izy io dia manana programa maivana indrindra ho an'ny pasipaoro ao amin'ny Vondrona eropeana. Rehefa lasa olom-pirenen'i Sipra ianao dia afaka mandeha mora any amin'ny firenena 150 tsy misy visa. Hanana ny fotoana hiainana, hitsangatsangana ary hiasana any amin'ireo firenena amerikana ianao. Manolotra tontolo tena azo antoka ho anao i Sipra. Betsaka ny toeram-pitsaboana kilasy voalohany. Ny firenena dia manana tahan'ny hetra ambany dia ambany raha oharina amin'ny firenena EU hafa. Ankoatr'izay, i Sipra dia manana rafi-pampianarana lehibe. Ny firenena dia tsy mitaky fitakiana fiteny na trano.
Fifindra-monina any Sipra
Ny tombotsoan'ny pasipaoro any Sipra dia azo ampiharina ihany koa amin'ireo mpianakavy akaiky, izay mety zaza latsaky ny 18 taona, na ankizy mihoatra ny 18 taona izay miankina amin'ny tompon'ny pasipaoro. Azo atao ny mampiditra ny vady ao amin'ilay fangatahana.
Zom-pirenena amin'ny alàlan'ny programa fampiasam-bola any Sipra insite
Ny fomba fampiharana dia iray amin'ireo haingana indrindra manerantany. Mety haharitra 3 volana izany. Tsy manana famerana ny zom-pirenena roa i Sipra. Tsy voatery ho any Sipra ianao mba hitazomana ny zom-pirenena. Ianao ihany no takiana hitsidika an'i Sipra isaky ny 7 taona. Aorian'ny fahazoana zom-pirenena anao dia hahazo ny tombony rehetra azonao omena anao i Sipra.
Ny fangatahana ara-bola ho an'i Sipra
Mba hahazoana fahazoana pasipaoro volamena any Sipra dia takiana ny hampiasa vola EUR 2 tapitrisa amin'ny trano sy trano, orinasa tokony hanana olom-pirenena 5 farafahakeliny miasa na amin'ny fananana ara-bola any Sipra. Azonao atao ihany koa ny mampiasa vola amin'ireo rehetra ireo amin'ny fotoana iray. Tokony hotehirizina mandritra ny 3 taona ny fampiasam-bola.
Ankoatr'izay, adidinao ny mividy trano any Sipra izay mitentina 500,000 EUR farafahakeliny. Tsy maintsy mitazona izany trano izany mandritra ny androm-piainany ianao. Raha te-hisafidy ny safidin'ny fampiasam-bola ianao dia ny vidin'io trano io dia ho tafiditra ao anatin'ny fitakiana fampiasam-bola farany ambany 2 tapitrisa EUR. Raha manana ny anaran'ny ray aman-dreninao na ny vadinao amin'ny fangatahana ianao dia takiana amin'ny ray aman-dreny koa ny mividy fananana mitentina EUR 500,000 farafahakeliny. Na, ny mpivady dia afaka miaraka mividy fananana mitentina EUR 1,000,000 farafahakeliny.
Ny saram-panjakana amin'ny fampiharana dia EUR 7,000 isaky ny olon-dehibe. Ny saram-panolorana dia azo ovaina arakaraka ny taona sy ny isan'ny fianakaviana.
Fanohanana ho an'ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola ho an'i Sipra
Ny ekipan'i zom-pirenena avy amin'ny Agents Investment for Sipra ary zom-pirenena avy amin'ny Investment mpisolovava ho an'ny Sipra manome mpanjifa sy ny fianakavian'izy ireo any Sipra miaraka amin'ny fanohanana ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola avy any Sipra, toeram-ponenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola avy any Sipra sy ny fahafaha-mifindra monina amin'ny fifindra-monina hafa, any amin'ny firenena 37.
Ny serivisinay dia tsy voafetra fotsiny amin'ny toeram-ponenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola avy any Sipra na Golden Visa avy any Sipra na zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola avy any Sipra na pasipaoro faharoa, izahay koa dia manampy amin'ny fanararaotana fampiasam-bola tsara indrindra avy any Sipra, manome vahaolana feno raha te-hanangana orinasa iray ianao Sipra na offshore, loharanom-pahalalana ho an'ny olombelona any Sipra sy ny maro hafa, izay misy ny fandrindrana ara-bola sy ny maro hafa.
Manampy ny mpanjifanay amin'ny vahaolana miorina amin'ny zom-pirenena ao Sipra sy avy amin'ny toeram-ponenana faharoa.
Fanohanana manokana ho an'ny olom-pirenen'i Sipra:
Manome mora vidy izahay Ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny serivisy fampiasam-bola ho an'i Sipra, amin'ny alàlan'ny zakanay takatry orinasan-dalàna momba ny fampiasam-bola sy ny fifindra-monina ho an'i Sipra, mpisolovava amin'ny fifindra-monina mora vidy ho an'i Sipra, zom-pirenena zakan'ny mpanolotsaina fampiasam-bola ho an'i Sipra, zom-pirenena zakan'ny mpisolovava mpamatsy vola any Sipra ary orinasa mpanolo-tsaina momba ny fifindra-monina any Sipra.
Ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola avy any Sipra ka hatramin'ny firenena 37.
Visa volamena any Sipra mankany amin'ny firenena 37.
Pasipaoro faharoa avy any Sipra mankany amin'ny firenena 37.
Fifindra-monina mifototra amin'ny orinasa avy any Sipra mankany amin'ny firenena 106.
Ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny programa fampiasam-bola avy any Sipra.
Fandaharana visa volamena any Sipra mankany amin'ny firenena 37.
Ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny programa fampiasam-bola avy any Sipra ka hatramin'ny firenena 37.
Fandaharana pasipaoro faharoa avy any Sipra mankany amin'ny firenena 37.
Fandaharana fifindra-monina momba ny fifindra-monina avy any Sipra ka hatrany amin'ny firenena 106.
Ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Sipra amin'ny alàlan'ny trano sy tany
Manome fanampiana ho an'ny fampiasam-bola amin'ny trano any Sipra izahay miaraka amin'ny fomba fijery fa tokony hahazo tombony tsara amin'ny mpanjifa any Sipra ny mpanjifa, isaky ny te-hiala amin'ny fampiasam-bola ataon'izy ireo ho an'ny zom-pirenenan'izy ireo amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola ho an'i Sipra izy ireo. Manana fifandraisana amina mpandrindra trano sy trano vitsivitsy faran'izay tsara eto Sipra izahay izay manana rakitsoratra tsara ary ny fananany dia any amin'ny toerana tsara any Sipra, mahazo valiny tsara indrindra.
Fandaharam-ponenana trano fonenana tsara indrindra ho an'i Sipra miaraka amin'ny fampiasam-bola amin'ny trano any Sipra.
Mila fantarina - Zom-pirenena Sipra amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola
Ny zom-pirenen'ny Mpisolovava amin'ny fampiasam-bola ho an'i Sipra dia hanome fanampiana an-tsipiriany momba ny zom-pirenena mahomby amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Sipra. Ny serivisy mahazatra anay ho an'ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola mankany Sipra dia misy:
Ho takatry ny mpisolovavanay ny fepetra takianareo amin'ny famindrana toerana avy any Sipra na any Sipra, mifototra amin'ny soso-kevitra horaisina
Miorina amin'ny fahazotoana voalohany izahay, mba hanomanana tatitra alohan'ny itondrana ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola ho an'i Sipra amin'ireo mpanjifa hahazoana ny zom-pirenenan'i Sipra ary hampihenana ny mety ho fandavana.
Miorina amin'ny tatitra momba ny fahazotoana miasa any Chypre, dia manolotra programa hafa mifandimby izahay mba hahombiazana bebe kokoa.
Mba hahafahantsika miroso amin'ny zom-pirenenanay amin'ny alàlan'ny fangatahana fampiasam-bola ho an'i Sipra dia mila kopian'ny pasipaoro mpanjifa sy fianakaviana izahay.
Fandikana sy fijoroana ho vavolombelona momba ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fangatahana fampiasam-bola ho an'i Sipra. Ireo mpisolovava manokanay momba ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola ho an'i Sipra sy visa volamena dia hanampy amin'ny famenoana endrika sy antontan-taratasy.
Vantany vao vonona ny antontan-taratasinao sy ny fianakavianao momba ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fangatahana fampiasam-bola ho an'i Sipra, dia hofenoinay tompon'andraikitra tompon'andraikitra any Sipra.
Vantany vao ekena ny fangatahanao ho Citizenship amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Sipra, dia mizara ny vaovao tsara aminao izahay ary manomboka miomana amin'ny fanohanana hafa.
Tsy manohana na manome zom-pirenena amin'ny alàlan'ny serivisy fampiasam-bola any Sipra izahay ho an'ireo olona voalaza etsy ambany na orinasa any Sipra:
zom-pirenena amin'ny alàlan'ny serivisy fampiasam-bola ho an'i Sipra dia tsy atolotra ho an'ny Mpivarotra na mpaninjara fitaovam-piadiana sy bala na avy any Sipra.
zom-pirenena amin'ny alàlan'ny programa fampiasam-bola ho an'i Sipra dia tsy atolotra amin'ny fanaraha-maso ara-teknika any Sipra na fitsikilovana indostrialy ny programa fampiasam-bola ao na avy any Sipra.
zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fakan-kevitra momba ny fampiasam-bola ho an'i Sipra dia tsy atolotra ho an'ny hetsika tsy ara-dalàna na heloka bevava any Sipra.
zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fanampiana ara-bola ho an'ny Sipra dia tsy natao ho an'ny olona mifandraika amin'ny Genetic material any Sipra.
zom-pirenena amin'ny alàlan'ny serivisy fampiasam-bola ho an'i Sipra tsy natao ho an'ireo orinasa miady amin'ny fitaovam-piadiana biolojika na nokleary mampidi-doza na mampidi-doza any Sipra.
zom-pirenena amin'ny alàlan'ny programa fampiasam-bola Ny fanampiana an'i Sipra dia tsy misy ho an'ny olona any Sipra mifandraika amin'ny varotra, fitehirizana any Sipra, na fitaterana taova olombelona.
zom-pirenena amin'ny fampiasam-bola ho an'ny Sipra dia tsy natao ho an'ny maso ivoho tsy ara-dalàna.
zom-pirenena serivisy fandaharana ho an'ny Sipra dia tsy natao ho an'ny antokom-pinoana sy ny fikambanana mpanao asa soa any Sipra.
zom-pirenena amin'ny serivisy fampiasam-bola ao Sipra dia tsy omena ny olona manao sary vetaveta any Sipra.
Ny zom-pirenentsika mpisolovava any Sipra aza manohana ny fandraharahana amin'ny fivarotana zava-mahadomelina any Sipra.
“Fanamarihana lehibe : MM Solutions INC dia mitaky fitandremana araka ny antonony mba hametrahana mialoha ireo antontan-taratasy AML ho an'ny mpanjifa ho an'i Sipra sy ny KYC saingy tsy ekenay ny tompon'andraikitra amin'ny fanilihana rehetra ataon'ny manampahefana ao Sipra ho fankatoavana ny fangatahana zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Sipra.
Ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Sipra sy any amin'ny firenena hafa, miampy fanampiana maro hafa.
Manome ny zom-pirenenan'olom-pirenena tsara indrindra izahay amin'ny alàlan'ny fanohanan'ny fampiasam-bola any Sipra ho famatsiam-bola, fifindra-monina ary drafitra trano any Sipra.
Manohana ny zom-pirenena iraisam-pirenena amin'ny traikefa fampiasam-bola sy ny takian'ny lalàna any Sipra, manamboatra vahaolana tsara indrindra izahay.
Ny zom-pirenenanay amin'ny alàlan'ny serivisy fampiasam-bola ho an'i Sipra dia manome ny vidiny mora indrindra, miaraka amin'ny taha mahomby azo trandrahana indrindra any Chypre.
Nandia traikefa an-taonany maro momba ny zom-pirenena roa ho any Sipra izahay manohana ny mpanjifa sy ny fianakavian'izy ireo ho any Sipra.
Zom-pirenena niainana avy amin'ny mpisolovava mpampanjari-bola ho an'i Sipra sy ireo mpiasan'ny lalàna ho an'i Sipra manome fanohanana ny mpanjifa.
Manana mpisolovava sy agence tsara indrindra izahay ho an'ny fizotrany sy ny fangatahana any Sipra izay manolo-tena amin'ny fahombiazanao.
Alohan'ny maha-Citizenship anao ho an'i Sipra ary aorian'ny fankatoavana, ny mpikambana ao amin'ny ekipa zokinay dia ho eo eo amin'ny sehatry ny asa aman-draharaha na fanampiana manokana an'i Sipra
Manana traikefa iraisam-pirenena amin'ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola izahay, anisan'izany i Sipra, manampy ny mpanjifa manerana an'izao tontolo izao amin'ny serivisy tsara indrindra.
Raha sanatria, tsy mahomby ny zom-pirenenanao amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Sipra, misy firenena 36 hafa izay tompoinay, vonona miaraka amin'ny drafitra B izahay.
Kajy ny vidin'ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola mankany Sipra
Mba hikajiana ny vidin'ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola ho an'i Sipra dia fenoy ny antsipiriany rehetra ao anatin'izany ny olona ao amin'ny fianakaviana sy ny taonany. Noho ny fahamaroan'ny mpanjifa any Sipra, afaka manome serivisy tsara kokoa izahay amin'ny vidiny mirary. Ny kajy dia misy, ny vidiny ho an'ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny programa fampiasam-bola ho an'i Sipra sy ny fiampangana hafa.
Karazana visa ho ho an'ny Sipra
Fomba fiasa momba ny fahazoan-dàlana ho an'i Sipra
Trano fonenana any Chypre
Fonenana maharitra any Sipra
Masoivoho sy Kaonsily any Sipra
Hetra any Sipra
Ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Sipra sy serivisy hafa
Noraisinay lisitra vitsivitsy ny serivisy omenay any Sipra ho takiana tsy ho ela na ho avy.
Raha mikasa ny hifindra miaraka amin'ny fianakavianao any Sipra ianao amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola, izahay mpiara-miasa aminao ho an'i Sipra, dia eo hanome serivisy hafa betsaka ary rahoviana no hangataka any Sipra amin'ny vidiny mirary.
Ankoatry ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fanoloran-tena momba ny fampiasam-bola ho an'i Sipra, manome serivisy, serivisy IT sy HR koa izahay any Sipra, izay tsy hitanao eo ambanin'ny elo iray nomen'ny mpanolontsaina hafa ho an'i Sipra izay nahatonga anay ho fivarotana tokana ho an'i Sipra sy firenena 106.
“Nanam-bola tamin'ny andrana an-taonany maro izahay ary nanerana ny firenena 106 mba hanampiana ny fianakaviana, ny olona ary ny traikefa ho an'i Sipra hahatratra ny tanjon'izy ireo sy ny hetahetany.”
Manohana ny lalan'ny mpanjifanay mihoatra ny zom-pirenena izahay amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola ho an'i Sipra miaraka amin'ny fanampian'ny mpisolovava anay, mpanolo-tsaina anay ary mpamatsy vola any Sipra sy iraisam-pirenena.
Orinasa any Sipra
Afaka manampy anao izahay misoratra anarana amin'ny orinasa any Sipra na Firenena an-dranomasina sy 106 (mora kokoa amintsika ny vidin'ny fisoratana anarana amin'ny orinasa any Sipra.)
Kaonty Banky any Sipra
Mila mpamatsy vola hifindra monina any Sipra kaonty amin'ny banky manokana any Sipra ary kaontin'ny banky any Sipra, afaka manampy amin'ny kaonty any ivelany koa izahay.
Varavarana fandoavam-bola any Sipra
Ampidiro fa mila consulting any Sipra ianao, ho an'ny vahaolana fandefasana nomerika any Sipra toy ny vavahady fandoavan-drazana na fintech any Sipra na vahaolana crypto, ampahafantaro anay.
Aorian'ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola ho Sipra raha mikasa ny manomboka orinasa amin'ny fividianana orinasa misy any Sipra ho an'ny fanombohana eo noho eo any Sipra.
Serivisy HR any Sipra
ny Orinasa misahana ny mpiasa eto Sipra afaka manampy anao amin'ny fandraisana mpiasa haingana. Azonao atao koa post vacancies any Sipra maimaim-poana.
Nomera telefaona virtoaly ho an'i Sipra
Rafitra telefaona ho an'ny orinasa any Sipra miaraka amin'ny isa virtoaly ho an'i Sipra Firenena 102 sy tanàna 291.
Serivisy fanomanana ara-bola any Sipra
Kaonty, fahazotoana tokony hatao any Sipra sy be lavitra.
Adiresin'ny birao virtoaly any Sipra
Orinasa manangana any Sipra
Aorian'ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Sipra, manangana orinasa ao Sipra.
Manome vahaolana IT etsy ambany izahay eto Sipra
Fampandrosoana e-commerce any Sipra
Fampandrosoana tranonkala any Sipra
Fampandrosoana Blockchain any Sipra
Fampandrosoana app ao Sipra
Fampandrosoana rindrambaiko any Sipra
SEO any Sipra
Mpisolovava amin'ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Sipra
Manome zom-pirenena momba ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny vahaolana amin'ny fampiasam-bola ho an'i Sipra izahay ary zava-dehibe ny fahombiazan'ny mpanjifanay, ho an'i Sipra, mpitarika izahay, ny orinasanay ho an'i Sipra dia manana mpiasan'ny fifindra-monina tsara indrindra any Sipra koa, manana ny lazany izahay amin'ny fanomezana traikefa mpanjifa tsara indrindra ho an'i Sipra miaraka amin'ny vahaolana mazava momba ny famatsiam-bola ho an'ny olona any Chypre sy ny fianakaviany. Ny zom-pirenenanay amin'ny alàlan'ny ekipan'ny fampiasam-bola ho an'i Sipra dia manome vahaolana voavolavola ho an'ny fahombiazan'ny mpanjifa.
Ny olona ao amin'ny fianakavianao (zanaka, vady, ray aman-dreny) dia mahazo fahazoan-dàlana hipetraka any Sipra, rehefa nekena ny fahazoan-dàlana hipetrakao any Sipra.
Ny fahefan'ny mpisolovava an'i Sipra dia takiana amin'ny hetsika ara-dalàna ho anao amin'ny alàlan'ny zom-pirenena avy amin'ireo mpisolovava mpamatsy vola any Sipra. Raha any Sipra ianao na mikasa ny hitsidika an'i Sipra, azonay atao ny mahazo etoana ny fahefanao mpisolovava.
Tsy mandoa vola fanampiny izahay hahazoana fahazoan-dàlana mpisolovava. Raha mikasa ny hanomboka fisoratana anarana any Sipra any lavitra any ianao, dia tokony ho ara-dalàna ny fahefana mpisolovava anao hampiasaina amin'ny faritanin'i Sipra. Miankina amin'ny firenena onenananao, tokony ho apetraka amin'ny apôstôly any Sipra izy io na ho ara-dalàna.
Fanontaniana napetraka matetika - Zom-pirenena avy amin'ny fampiasam-bola any Sipra
Inona ny famaritana ny toeram-ponenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Sipra?
Ny toeram-ponenana amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Sipra, dia azo faritana ho, fahazoana onenana any Sipra amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola amin'ny toekarena any Sipra amin'ny alàlan'ny fomba isan-karazany toy ny, orinasa, trano, fifamatoran'ny governemanta, sns. tohanan'ny toeram-ponenana amin'ny alàlan'ny serivisy fampiasam-bola ho an'i Sipra, amin'ny alàlan'ny toeram-ponenanay tsara indrindra ataon'ireo mpisolovava amin'ny fampiasam-bola any Sipra, toeram-ponenana tsara indrindra ataon'ireo mpisolovava amin'ny fampiasam-bola any Sipra ary toeram-ponenana tsara indrindra ataon'ny mpanolotsaina fampiasam-bola ho an'i Sipra, miasa ao amin'ny toeram-ponenana tsara indrindra ataon'ireo masoivohom-bola any Sipra, ary orinasa mpanadihady momba ny fifindra-monina tsara indrindra any Sipra.
Fonenana amin'ny alàlan'ny serivisy fampiasam-bola ho an'i Sipra | Fonenan'ny mpiasa mampiasa vola any Sipra | Fonenan'ny mpisolovava amin'ny fampiasam-bola any Sipra | Fonenan'ny mpisolovava amin'ny fampiasam-bola any Sipra | Fonenan'ny mpanolotsaina fampiasam-bola ho an'i Sipra
Inona ny famaritana ny zom-pirenena amin'ny fampiasam-bola any Sipra?
Ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Sipra, dia azo faritana ho, fahazoana zom-pirenen'i Sipra amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola amin'ny toekarena any Sipra amin'ny alàlan'ny fomba maro samihafa toy ny, orinasa, trano, fifamatoran'ny governemanta, sns any Sipra. Mangataka ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Sipra, ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny programa fampiasam-bola ho an'i Sipra tohanan'ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny serivisy fampiasam-bola ho an'i Sipra, amin'ny alàlan'ny zom-pirenenanay tsara indrindra ataon'ireo mpisolovava amin'ny fampiasam-bola any Sipra, zom-pirenena tsara indrindra ataon'ireo mpisolovava amin'ny fampiasam-bola any Sipra ary olom-pirenena tsara indrindra ataon'ireo mpanolotsaina fampiasam-bola ho an'i Sipra, miasa amin'ny zom-pirenena tsara indrindra amin'ny alàlan'ny masoivohom-bola any Sipra, ary ny orinasa mpanolotsaina mpifindra monina tsara indrindra any Sipra.
Serivisy fifindra-monina ho an'ny mpampiasa vola any Sipra | Mpisolovava amin'ny fifindra-monina mora vidy any Sipra | Mpisolovava amin'ny fifindra-monina mpampiasa vola any Sipra | Mpisolovava amin'ny fifindra-monina mpampiasa vola any Sipra | Mpanolo-tsaina momba ny fifindra-monina mpampiasa vola any Sipra | Orinasa mpahay lalàna mifehy ny fifindra-monina ho an'i Sipra
Inona ny famaritana ny pasipaoro faharoa any Sipra?
Pasipaoro faharoa any Sipra, azo faritana ho, fahazoana zom-pirenen'i Sipra amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola amin'ny toekarena any Sipra amin'ny alàlan'ny fomba maro samihafa toy ny, trano sy tany, orinasa, fifamatoran'ny governemanta, sns. Mangataha pasipaoro faharoa mankany Sipra, programa pasipaoro faharoa ho an'i Sipra tohanan'ny serivisy pasipaoro faharoa ho an'i Sipra, amin'ny alàlan'ny mpisolovava pasipaoro faharoa tsara indrindra any Sipra, mpisolovava pasipaoro faharoa tsara indrindra any Sipra ary mpanolo-tsaina pasipaoro faharoa tsara indrindra ho an'i Sipra, miasa amin'ny mpiasan'ny pasipaoro faharoa tsara indrindra any Sipra, ary orinasa mpanolotsaina fifindra-monina tsara indrindra any Sipra.
Serivisy pasipaoro faharoa ho an'i Sipra | Mpanamboatra pasipaoro faharoa any Sipra | Mpisolovava pasipaoro faharoa any Sipra | Mpisolovava pasipaoro faharoa any Sipra | Mpanolo-tsaina pasipaoro faharoa ho an'i Sipra
Inona ny famaritana ny visa volamena any Sipra?
Visa volamena any Sipra, azo faritana ho, fahazoana fahazoan-dàlana hipetraka any Sipra amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola amin'ny toekarena any Sipra amin'ny alàlan'ny fomba isan-karazany toy ny, fatoram-panjakana, asa aman-draharaha, trano, sns. Mangataha visa volamena any Sipra, programa visa volamena ho an'i Sipra tohanan'ny Serivisy visa volamena ho an'i Sipra, amin'ny alàlan'ny mpisolovava visa tsara indrindra any Sipra, mpisolovava visa tsara indrindra any Sipra ary mpanolo-tsaina visa volamena tsara indrindra ho an'i Sipra, miasa amin'ny masoivoho visa volamena tsara indrindra any Sipra, ary orinasa mpanolotsaina fifindra-monina tsara indrindra any Sipra.
Serivisy visa volamena ho an'i Sipra | Agent visa volamena any Sipra | Mpisolovava visa volamena any Sipra | Mpisolovava amin'ny visa volamena any Sipra | Mpanolo-tsaina visa volamena ho an'i Sipra
Inona ny fampiasam-bola farafahakeliny ho an'ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Sipra?
Fampiasam-bola farafahakeliny ho an'ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Sipra dia EUR 2.15 tapitrisa.
Manome fanampiana ara-dalàna an'i Sipra ho an'ny zom-pirenena amin'ny fampiasam-bola ve ianao?
Eny, ny mpisolovava anay any Sipra sy ireo masoivoho any Sipra dia manome fanohanana ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Sipra.
Mandany vola ve ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola mankany Sipra?
Ny vidin'ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola mankany Sipra ary ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fitakiana tahirim-bola ho an'i Sipra dia ho an'ny olona manankarena avo lenta, ny saram-pakan-kevitra momba ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola mankany Sipra ihany koa, manome ihany koa fanohanana hafa maro ho an'ny zom-pirenena amin'ny vahaolana Investment.
Iza amin'ireo mponina no afaka mangataka ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Sipra na visa ho an'ny mpampiasa vola any Sipra?
Ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny serivisy fampiasam-bola ho an'ny mpampiasa dia afaka ampiasain'ny olom-pirenena amin'ny firenena rehetra, saingy ohatra vitsivitsy monja dia ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Sipra avy any Azia, ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola mankany Sipra avy any Afrika, ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola mankany Sipra avy any Eropa, ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Sipra avy any Amerika atsimo, Ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Sipra avy any Malezia, ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Sipra avy any Bangladesh, ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola mankany Sipra avy any Indonezia, ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola any Sipra avy any Sri Lanka, ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola mankany Sipra avy any Nepal, tamin'ny fampiasam-bola ho an'i Sipra avy any UAE.
Zom-pirenena mizaka tena amin'ny alàlan'ny fitarihana fitarihana ho an'ny Sipra
Mangataha dinika maimaimpoana ho an'ny zom-pirenenananao amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola mankany Sipra
Teny manan-danja amin'ny zom-pirenena amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola ho an'i Sipra
rohy Departemantan'ny fifindra-monina any Sipra , tompon'andraikitra amin'ny famolavolana politika hanafainganana ny fifindra-monina ao Sipra